Lalàna No. 33 an'ny 2008- Real Estate Real Estate avy amin'ny Provident
Lalàna No. 33 an'ny 2008 Fifandraisana eo amin'ny tompon-trano sy mpiharo
We MohammedBin Rashid Al Maktoum, mpitondra ao Dubai
Taorian'ny fampiharana ny Lalàna Federaly No. 5 an'ny 1985, mikasika ny Transaction Civil sy ny fanitsiana,
Ary ny Lalàna Federaly No. 10 ao amin'ny 1992 dia manambara ny lalàna ho porofo momba ny raharaha sivily sy ara-barotra ary ny fanitsiana nataony,
Ary ny Lalàna No. 16 amin'ny 2007, fametrahana ny Masoivoho Regulatory Real Estate,
Ary ny Lalàna No. 26 amin'ny 2007 Manome ny fifandraisana eo amin'ny tompon-trano sy ny mpihary ao amin'ny Emiratin'i Dubai (antsoina hoe Lalàna Original),
Ary ny Didim-panjakana laharana faha-2 an'ny 1993, fametrahana ny Kaomisiona manokana hiadian-kevitra
Fifandirana teo amin'ireo tompon-trano sy ny mpitrandraka sy ny fanitsiana,
Ny lahatsoratra (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29) & (36) nosoloina ireto lahatsoratra manaraka ireto:
Amin'ny fampiharana ny fepetra voalazan'ity lalàna ity, ireto teny sy fehezan-teny manaraka ireto dia hanana ny hevitr'izy ireo, raha tsy hoe angatahan'ny takelaka hafa:
Emirà: Emirà avy ao Dubai.
komity: Ny Kaomity Fitsarana dia nanome alalana ny hametraka solombavambahoaka eo anelanelan'ny tompon-trano sy ny mpamboly.
Property: Ny fananana tsy azo havao sy ny tranokala azon'izy ireo ho an'ny trano, sehatra ara-barotra na ara-barotra na asa hafa hafa.
Fepetra takiana: Ny fifanarahana izay tompon'andraikitra amin'ny tompon'andraikitra mba ahafahan'ny mpitrandraka mandray soa avy amin'ny fananana ho an'ny tanjona voafaritra sy fe-potoana mifanohitra amin'ny fiheverana voatondro.
tompon-tranon'i: Ny olona voajanahary na fitsarana ara-dalàna izay manana lalàna na fankatoavana ny zo amin'ny fanesorana ny fananana ary ny tompon'ilay fananana dia nafindra nandritra ny fe-potoam-piasana na ny solontenany na ny mpisolovava azy, anisan'izany ilay mpitrandraka nahazo alalana avy amin'ny tompon-trano mba hanolotra azy ireo fananana.
mpanofa: Olona voajanahary na mpitsara izay mandray soa avy amin'ny fananana, na ny ampahany azy, mifanaraka amin'ny fifanarahana momba ny fifanekena sy ny olona mandray ny maha-mpitsara azy amin'ny tompon'andraikitra.
Subtenant: Olona voajanahary na mpitsara izay mandray soa avy amin'ny fananana, na ny ampahany azy, mifanaraka amin'ny fifanekena fifanekena natao tamin'ny mpikarakara.
Rent: Ny fiheverana voafaritra izay tsy maintsy handoan'ilay mpikarama mifanaraka amin'ny fifanekena momba ny fifanekena.
Fampandrenesana: Fanoratana an-tsoratra nalefan'ny fifanarahana momba ny fatiantoka ho an'ny antoko hafa amin'ny alàlan'ny taratasim-panjakana, nomerao mailaka, famindrana manokana na fitaovana teknolojia ankatoavin'ny lalàna.
Io lalàna io dia azo ampiharina amin'ny tany sy tany fananana any Emiràny, raha tsy misy trano fonenana natolotry ny olon-tsotra na ny fitsarana ho an'ny mpiasany.
1) Ny fifandraisana misy eo anelanelan'ny tompon-trano sy ny mpandraharaha dia tokony hifehezan'ny fifanarahana momba ny fananana izay mamaritra ny fananana amin'ny antsipiriany, ny tanjon'ny fandaniana, ny vanim-potoana, ny fisavana ary ny anaran'ny tompony raha tsy tompon'ny tompony.
2) Ny fananana rehetra mifanaraka amin'ity lalàna ity, na ny fanitsiana azy, dia tokony hosoratana miaraka amin'ny Masoivoho.
1) Ny tompon-trano sy ny mpikarakara dia tokony hampahafantatra ny sandan'ny vidin'ny fifanekena. Raha samy
Ireo antoko dia tsy namaritra izany na raha toa ka tsy afaka manaporofo izany ny antoko
fifanarahana dia avy eo ny hofam-barotra dia mitovy amin'ny lenta mitovy amin'izany.
2) Ny Komity dia manondro ny hofan-trano mitovy amin'ny fombafomba milaza ny fampiakarana ny vidin'ny fampindramana ampiharina avy amin'ny masoivoho ary mifanaraka amin'ny toe-karena ara-toekarena ao amin'ny Emirat, ary mifanaraka amin'ny toeran'ny fananan-tany, ny fampindramam-bola mitovy amin'izany any amin'ny faritra iray ihany sy raha mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery rehetra ao amin'ny Emirate momba ny trano hofaina sy ny antony hafa mety hapetraky ny Komity.
Ho fanamafisana ny fifanekena momba ny fatiantoka, ny tompon-trano ary ny mpikarakara ny fatiantoka ny fifanekena dia mety hanova ny fepetra momba ny fifanekena na hamerenana ny hofan-trano na amin'ny fampitomboana na fihenam-bidy. Raha toa ka tsy mahazo fifanarahana momba izany ny antoko dia afaka manapa-kevitra ny hofan-trano ny komity raha jerena ny fitsipika voalaza ao amin'ny Andininy No. (9) amin'ity Lalàna ity.
Raha misy antokon'ny fifanarahana amin'ny fatiantoka dia maniry ny hanatsara ny fepetra rehetra mifanaraka amin'ny Andininy (13) amin'ity Lalàna ity, dia tokony hampandrenesiny toy izany amin'ny antoko hafa fa tsy latsaky ny 90 andro mialoha ny daty fialantsiny, raha tsy hoe ny antoko roa dia azo atao ny manaiky handoa ny fananana tsy vita, raha toa ny mpitrandraharaha manatanteraka izany ary manomana azy amin'ny toe-javatra tsara mba hahazoana ny tombontsoa nangatahina, ary ny antoko dia hanapa-kevitra ny antoko izay ho tompon'andraikitra amin'ny vidin'ny fanatanterahana izany.
1) Ny mpikarakara dia mety hitaky ny fandroahana ny mpikarakara mialoha ny vanim-potoanan'ny fandaniana amin'ireto tranga manaraka ireto:
Raha toa ka tsy mandoa ny sandan'ny sandany, na ny ampahany azy, amin'ny telozoro (30) andro fampandehanana tompon-trano amin'ny fampandehanana; raha tsy misy ny fifanarahana.
Raha ny mpitrandraka dia mametraka ny fananana, na ny ampahany azy, tsy misy tompon'ny fahazoan-dàlana voasoratra ary amin'ny tranga toy izany dia azo ampiharina amin'ny mpitrandraka sy ny mpividy, ary ny fe-potoana hiantsoana ny mpangataka ho amin'ny fanonerana dia voatokana.
Raha ampiasain'ny mpandraharaha, na mamela ny hafa hampiasaina, ny fananana hetsika tsy ara-dalàna na fitondran-tena.
Raha tranombarotra ara-barotra ny tranokalan'ny trano ary ny mpitrandraka dia namela izany tsy misy fibodoana ary tsy misy antony ara-dalàna ho an'ny 30 andro mitohy na 90 tsy mitohy isan'andro ao anatin'ny taona iray; raha tsy hoe nanaiky izany ny antoko.
Raha ny mpitrosa dia miteraka fanovana izay mampidi-doza ny fiarovana ny tany amin'ny fomba tsy ahafahana mamerina amin'ny toetrany tany am-boalohany, na raha miteraka voka-dratsy ny trano na noho ny fahantrany henjana mba handraisana fepetra tsara na hamela ny hafa hiteraka fahavoazana toy izany .
Raha mampiasa ny trano ny mpitrosa amin'ny tanjona hafa fa tsy ny tanjona napetrak'izy ireo na raha mampiasa ny trano izy amin'ny fomba iray mandika ny planina, ny fanorenana ary ny fampiasana ny lalàna.
Raha misy loza mitatao ny trano, raha toa ny tompon-trano iray ka manaporofo izany toe-javatra izany amin'ny alalan'ny tatitra ara-teknika navoakan'ny tanànan'i Dubai na nekena azy io.
Raha toa ka tsy mahafeno ny fepetra ara-dalàna na fifanarahana amin'ny fifanekena momba ny fifanarahana dia tsy maintsy atao ao anatin'ny (30) andro mialohan'ny daty fampandehanana amin'ny tomponà tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ireo fepetra na fepetra toy izany.
Raha toa ny fepetra fampandrosoana ao amin'ny Emirate dia mitaky ny fandravana sy ny fametrahana ny fananana araka ny baikon'ny mpitondra fanjakana. Ary ho an'ny tanjon'ity fepetra ity (1) amin'ity andininy ity, ny tompon-trano dia tokony hampahafantatra ny mpikarakara amin'ny alalan'ny Notater Public na amin'ny mailaka voasoratra.
2) Ny mpikarakara dia afaka mangataka ny fandroahana ny mpitrandraka rehefa tapitra ny fetran'ny fatiantoka ho an'ny fatiantoka:
Raha maniry ny handrava ny trano ho an'ny fanarenana ny tompony na hanangana trano vaovao izay manakana ny mpitrandraka tsy hahazo tombony amin'ny fahazoan-dàlana, raha toa ka nahazo alalana ilaina izy ireo.
Raha mitaky fanavaozana na fikojakojana tanteraka izay tsy azo atao raha ny mpitrandraka no mibodo ny tany, raha toa ka misy tatitra ara-teknika navoakan'ny tanànan'i Dubai na ny fanamarinana azy, dia tokony halefa amin'io vokatra io.
Raha maniry ny hamerenana ny fananana ho azy manokana ny tompon'ny fananana, na amin'ny maha-voalohany azy, raha toa izy ka manaporofo fa tsy manana fananana hafa mety izy amin'izany.
Raha maniry ny hivarotra ny tranofiaram-pivarotana ny tompon'ny fananana. Ary ho an'ny tanjon'ny fepetra (2) amin'ity andininy ity, ny tompon-trano dia tokony hampandrenesana mpikarakara ny mpitsoa-ponenana noho ny antony fandroahana azy, farafaharatsiny roa volana mialohan'ny daty voafaritra ho fialokalofana nalefa tamin'ny Notary Public na amin'ny mailaka voasoratra.
Raha manapa-kevitra ny tompon-trano ny Komity mba hanangona ny fananana amin'ny fampiasany manokana, na hampiasana azy amin'ny alàlan'ny fepetra voalazan'ny andininy (c) amin'ny andininy (2) amin'ny article (25) amin'ity lalàna ity, dia tompon-trano dia tsy hanofa ny trano ho an'ny hafa mandritra ny roa taona farafahakeliny ho an'ny trano fonenana ary telo taona noho ny tsy fananana trano fonenana manomboka amin'ny daty fanarenana ny fananana, raha tsy ny komity no manapa-kevitra ny fotoana fohy noho ny antony heveriny fa, raha tsy izany, ny mpitrosa dia hanana ny zo mba hangataka ny Komity hikarakara ny fanonerana azy manokana.
1) Ny mpitrosa dia tokony hanana ny laharam-boninahitra hiverina any amin'ilay trano raha rava sy ny fanavaozana azy na raha havaozina izany, raha toa ka hajaina araka ny Andininy (9) ny lanjany.
2) Ny mpitrandraka dia handray soa avy amin'ilay zo voalaza etsy ambony voalaza ao anatin'ny telopolo (30) andro izay tsy hampahafantarin'ny tompon-trano.
Ny filohan'ny Filan-kevitry ny Mpanatanteraka dia mamoaka ny fepetra ilaina, ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra hampihatra ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity.
Ity Lalàna ity dia havoaka amin'ny Gazety ary ampiharina amin'ny daty misy azy.
Navoakanay tao Dubai tamin'ny 1December 2008